Guriga furan ee CACC – Daraasad | WSDOT
homeagency projectsOnline open housesGuriga furan ee CACCDaraasad
Guriga furan ee CACC – Daraasad
CACC waxay u aragtaa in ayna jirin xal kaliya oo lagu xalin karo dhamaan baahida awoodaha gadiidka cirka ee Washington. Waxa aqoonsanahay in:
Xalku ay tahay inuu u dhigmo bulshooyinku ku xeeran Washington
Xalalku waxay ka faa’idaysan karaan teknooloojiyada soo baxaysa
Si wanaagsan uma fahansanin saamaynta mudada dheer ee safmarka COVID-19 ee shaqada dadka iyo nolosha
Waa in aanu ku xisaabtanaa dadaalka lagu samaynayo xalalka ee lagu yaraynayo ama meesha lagaga saarayo saamayn caafimaad ee xun
Gadiidka cirku waxa uu qayb muhiim ah ka yahay dhaqaalaheena
Lixda meelood ee lasoo xulay
Janaayo 2021, CACC waxay soo saartay liiska hordhaca ah ee lix gobood oo madaarka laga dhigi karo oo buuxinaya wax kamid ah adeegyda baahiyaha rakaabka, kaargooga ama gaadiidka cirka guud ahaan. Meelahan, oo ay la socdaan waxoogaa faahfaahin ahi, hoos ayay ku qoran yihiin.
Madaarka Dawlada Hoosee Arlington
Madaarka Dawlada Hoosee Arlington waxaa weeye madaar ka shaqeeya guud ahaan gaadiidka cirka oo ku yaal Degmada northern Snohomish oo leh ranway ah 5,332-fuudh lagu dhuftay 100-fuudh
Siday uu u buuxin karto dalabka
Madaarka Dawlada Hoosee Arlington waxa uu ka jawaabi karaa baahida gaadiidka cirka guud ahaan. Waxaa ka dhisan wax badan labada dhinac ee ranwayga, oo way adkaanaysaa in ranwayga laga kordhiyo 6,500 oo fuudh. Dhererkiisu ma qaadayo duyuuradaha rakaabka ama kaargooga waawayn. Madaarka Magaalada Arlington, waxa uu diirada saara adeega gaadiidka cirka ee guud.
Madaarka Bremerton National
Bremerton National waxaa weeye madaarka ugu wayn ee ku yaal Kitsap peninsula oo waxa uu bixiyaa adeega guud ee gaadiidka cirka. Waxa uu leeyahay ranway ah 6,000 fuudh lagu dhuftay 150 fuudh.
Madaarka Bremerton National waxa laga heli karaa bakhaaro dheeraad ah oo gaadiidka cirka guud ahaan ah oo waxa uu kordhinayaa shaqada gaadiidka cirka. Xubnaha gudidu waxay muujiyen inay jeclaan lahaayeen in laga sameeyo kaargooga Bremerton, laakiin dadka kasoo deega waaxdan aragtidaas lama wadaagaan masaafada uu u jiro madaarku meesha ay dadku ku badan yihiin. Tacoma, meesha ay dadku ku badan yihiin ee ugu dhaw, waxay u jirtaa 32 mayl oo waxaana loo soconayaa celcelis ahaan 45 daqiiqo.
Ed Carlson Memorial Field (Madaarka Degmada South Lewis)
Waxa uu ku yaalaa Toledo, Ed Carlson Memorial Field oo waxa uu ka shaqeeyaa gaadiidka cirka guud ahaan oo waxa uu leeyahay ranwayn ah 4,479 fuudh lagu dhuftay 150-fuudh.
Maadaama oo Bremerton National, Ed Carlson Memorial Field oo ka fog yahay meesha dadku ay ku badan yihiin waxaa adag in laga helo adeega kaargooga ama rakaabka. Toledo waxa uu u jiraa 47 mayl meesha ugu dhaw ee dadku ku badan yihiin, Olympia, oo waxaanu ka badhtankooda in isku jirta u jiraa madaarada Sea-Tac iyo Portland. Madaarka inta la kordhiyo ayaa laga dhigi karaa madaar bakhaaro kayd ah oo dayuuradaha gaadiidka cirka ee guud ah. Kan waxa uu qaban karaa waxyar oo hawlaha guud ee gadiidka cirka maadaama oo uu ka fog yahay meesha ay dadku ku badan yihiin. Madaarka, oo ay maamusho Degmada Lewis, waxaa diirada lagu saaraa adeegyada gaadiidka cirka ee guud.
Waxa aanu dhagaysanay talooyinka bulshada
Paine Field (Madaarka Degmada Snohomish)
Paine Field waxa uu leeyahay adeega rakaabka iyo gaadiidka cirka guud iyo ranway ah 9,010 fuudh lagu dhuftay 150 fuudh. Paine Field waxa uu bilaabay bixinta adeega rakaabka Maarso 2019, kaas oo isku xidha goobaha Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Arizona, iyo Colorado.
Paine Field waxaa iminka lagu wadaa balaadhin – waxaad wax ka ogaan karta nashqada madaarka websaytkiisa.
Paine Field waxa uu awoodaa inuu bixiyo kaargooga iyo adeeg rakaab oo dheeraad ah. Paine Field waxaa wakhtiga xadidan waxa uu haysto ee uu ku qaabili karo rakaab dheeraad ah maalintii. Dadka lagala shaqeeyo kaargoogu waxay muujiyeen in Paine Field uu ku wanaagsan yahay inuu ka shaqeeyo adeego diyaaradaha kaargooga, oo FedEx ayaa muujisay rabitaan inay halkaas ka bilawdo. Maadaama adeega rakaabka uu hore u bixiyo, waxaa macquul ah in diyaaraduhu ay bixin karaan adeeg dheeraad ah iyo alaabta dadku wataan oo lagu qaado khanka diyaarada.
Madaarka Sanderson Field (Shelton)
Sanderson Field waxa uu ku yaalaa Degmada Mason oo waxa uu ka shaqeeyaa hawlaha gaadiidka cirka ee guud oo waxa uu leeyahay 5,005-fuudh lagu dhuftay 100-fuudh ranway ah.
Madaarka Sanderson Field waxaa adag inuu ka shaqeeyo adeegyada rakaabka ama kaargooga maadaama oo uu ka fogyahay meesha ay dadku ku badan yihiin. Shelton waxa uu u jiraa 25 miyl Olympia, iyo goobta ugu dhaw ee shacabku degan yahay. Madaarku waxa uu bixin karaa hangaro hawlaha gaadiidka cirka ee guud ah. Dekada Shelton waxay leedahay dhul wanaagsan oo laga dhigi karo hangaro hawlaha gaadiidka cirka. Kan waxa uu qaban karaa waxyar oo hawlaha guud ee gadiidka cirka maadaama oo uu ka fog yahay meesha ay dadku ku badan yihiin.
Madaarka Tacoma Narrows (Gig Harbor)
Waxa uu ku yaalaa Degmada Pierce, oo afar mayl galbeed ka xigta Tacoma, Madaarka Tacoma Narrows oo ka shaqeeya gaadiidka cirka guud oo waxa uu leeyahay ranway 5,002-fuudh lagu dhuftay 100 fuudh ah. Degmada Pierce waxay iminka wadaan hormarin madaarka ah, sida lagu sheegey qoshaha guud 2015.
Tacoma Narrows waxay u badan tahay in aanu bixin adeegyada rakaabka ama kaargooga maadaama uu yar yahay dhererka ranwaygiisu. Tacoma Narrows waxa uu u jiraa sagaal mayl Tacoma iyo I-5, laakiin waa inay ka gudbaan Narrows Bridge iswticmaalaya badan oo madaarka ahi. Waxaa jira dhismayaal badan oo ku xeeran madaarka oo markaa xadidaya balaadhintiisa. Ranwaygu waxa uu wakhti xaadirkan ka dheer yahay waxoogaa 5,000 oo aad ayuu ugu gaaban yahay dayuuradaha rakaabka iyo kaargooga, laakiin waxaa weeye kuwa loo doorbido hawlaha gaadiidka cirka. Madaarku waxa qaabili karaa dayuuradaha qaar hawlaha gaadiidka cirka guud ee madaaro kale. Madaarka, oo ay maamusho Degmada Pierce, waxaa diirada lagu saaraa adeegyada duulimaadka guud.